AutoPitch: otomatiga emaylka ee wakiilada horumarinta iibka | Martech Zone
AutoPitch: Emayl otomaatig ah oo loogu talagalay Wakiillada Horumarinta Iibka
Thursday, April 12, 2018 Axad, Abriil 15, 2018 Douglas Karr
Waxaa jira waqtiyo badan oo wakiilada iibku ay leeyihiin liis aad u fiican, laakiin dadaalka loo baahan yahay in lagu diro emayl markiiba markiiba wuxuu qaadanayaa dadaal aad u badan. AutoPitch si toos ah ayey ula midoobaysaa emaylkaaga, waxayna awood u siineysaa templating, ka dibna waxay dib uga soo warbixineysaa waxqabad kasta ama ka qeyb qaadasho la xiriirta emaylladaas. Xitaa waad dejin kartaa qaabab taxane ah oo loo diro liiskaaga.
Ku soo jiidista liistada liiska qabow ee boosteejada emaylka waxay shirkad ku heli kartaa xoogaa dhibaato ah adeeg bixiyahooda. AutoPitch waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku xirto oo aad si toos ah ugu dirto emayllada gaarka loo leeyahay akoonkaaga xafiiska.
Maareynta Lead - Eeg diiwaanada xiriirka oo faahfaahsan, oo ku arag taariikhda isgaarsiinta hal meel si aad u maamuli karto hogaaminta dhib la'aan.
Farriinta Midawga - Waxyaabaha ku milma meeraha waxaa ka mid ah raadinta furan, guji raadinta, mideynta meeliyeynta jadwalka, jadwalka, iyo inbadan.
habyaalada - Mawduucyada emailka la wadaago, ee kooxda oo dhan. Looma baahna in laga beddelo hal codsi oo loo beddelo mid kale. Wax walba hal meel ah!
Gawaarida Gawaarida Gawaarida - Kordhi heerka jawaabtaada emaylka dabagalka tooska ah. Kordhi raadad dheeri ah oo kor u qaad waxtarka.
Liiska Xakamaynta - Kudar domains iyo emayl liiska xakamaynta, si looga hortago ku xad gudubka CAN-SPAM.
hawlaha Abuur, jadwal samee oo u xilsaar hawlo si aanad weligaa u seegin dabagal.
Waxaad sidoo kale ku shaqeyn kartaa AutoPitch koox dhan koonto hal ah. AutoPitch wuxuu la shaqeeyaa Google Apps (Gmail), Microsoft Exchange, Office 365, ama bixiye kasta oo emayl ku saleysan SMTP.
Saxiix u qor AutoPitch
Tags: goynta gawaaridaotomatiga emaylkaG SuiteGmailjiilka ledxafiiska 365Odoroskaliisaska hawsha iibkaemayllada isku xigxigaSMTPliiska xakamaynta
Waa maxay Aaladda Suuqgeynta Mobaylka?